Ntuziaka Europe chọrọ ka ndị otu otu hazie aha UBO. UBO na-anọchite anya onye nwe ụlọ bara uru. A ga-edebanye aha UBO na Netherlands na 2020. Nke a gụnyere na site na 2020 gaa n'ihu, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu kwadoro ka ha deba aha ndị nwe ha (na). Akụkụ nke data nke UBO, dịka aha na akụnụba akụ na ụba, ga… GỤKWUO
Gwọ ọ bụla nke ihe ọghọm na-abụghị ihe kpatara ọnwụ ma ọ bụ ihe ọghọm bụ nke iwu obodo Dutch kpuchitere n'oge na-adịbeghị anya. Ihe ọghọm ndị a na-abụghị ihe onwunwe nwere iru uju nke ndị ikwu dị nso bụ nke ihe omume nke ọnwụ ma ọ bụ ihe ọghọm nke onye ha hụrụ n'anya mere nke ga-eme ka ndị ọzọ nwee ntaramahụhụ. Kinddị ụgwọ a bụ nke… GỤKWUO
Ndị ọchụnta ego na-ewe ndị ọrụ n’ọrụ, na-ekenye ndị ọrụ a ozi nzuzo. Nke a nwere ike ịkọwa ozi gbasara teknụzụ, dịka uzommeputa ma ọ bụ algorithm, ma ọ bụ ozi na-abụghị ọrụaka, dị ka ntọala ndị ahịa, atụmatụ ahịa ma ọ bụ atụmatụ azụmaahịa. Agbanyeghị, kedu ihe ga-eme na ozi a mgbe onye ọrụ gị malitere ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke ndị asọmpi ahụ? Nwere ike ichebe ozi a? N'ọtụtụ ọnọdụ,… GỤKWUO